အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်လိုသော လူငယ်များအတွက် “yli” at Taw Win Centre, Yangon
အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်လိုသော လူငယ်များအတွက် “yli”
Time Fri Jul 27 2018 at 09:00 am to Sun Jul 29 2018 at 02:00 pm
Venue Taw Win Centre, Taw Win Shopping Center, Yangon, 11191, Yangon, Burma
Created by Kathryn Talks Follow Contact Promote Your Event
*** "အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်လိုပြီး အများအကျိုး ဆောင်ရွက်လိုသောလူငယ်များအတွက်" ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၈ ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် Program3ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ပါမယ် ***
“YLI ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ" ???
- YLI program သည် မြန်မာပြည်တွင်ပထမဆုံးသော program (Young Leaders Initiative Program) ဖြစ်ပါတယ်
- Season 1 တစ်နှစ်လျှင် (၄)ကြိမ်သာပြုလုပ်ပါသည်
2018 Season(1)၏ Program 1 &2ကို မန္တလေးမြို့London Business Academy တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်
- YLI ၏ Founder သည် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ယခုလို program များတက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူငယ်ခေါင်းဆောင်များပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် စတင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်
- Vietnam နိုင်ငံ Hanoi မြို့တွင် ကျင်းပသော "The biggest marketing event in Asia,2018” Success Conference တွင် International speaker များနှင့် speaker & panelist အနေဖြင့် ဆွေးနွေးပေးရန် ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်
- “The Myanmar Young Entrepreneur Winner (2017)” ဆုရရှိထားပြီး အောင်မြင်သော လုပ်ငန်းလေးခုလုပ်ကိုင်နေသော နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မှ အတွေ့အကြုံများ နှင့် သီအိုရီများကို ပေါင်းစပ်ကာ ကိုယ်တိုင်သင်ကြားမှာပါ
- နိင်ငံတကာသင်ရိုးများနှင့် Group Work, activities များနှင့်အတူ (၁၄)နာရီကြာ ခေါင်းစဉ် (၁၅)ခုဖြင့်သင်ကြားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်
- သင်တန်း(၃) ရက်သင်ရုံနဲ့ မပြီးသွားပါဘူး သင်တန်းတက်ပြီးသွားတာနဲ့ YLI ရဲ့ member ဖြစ်သွားပြီး YLI closed group ထဲတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ် လစဉ် YLI ရဲ့ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု activity တွေမှာ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်
- နိုင်ငံတကာရှိ YLI အသင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ scholarship များလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်
- ဟောပြောပွဲမဟုတ်ပါ Workshop နှင့် class ဖြစ်သည့်အတွက် လူဦးရေ (၅၀) သာ ကန့်သတ်ထားပါတယ်
- အခြေခံအထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ အသက် (၁၆) နှစ်မှ (၃၅) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမည်
နေ့ရက် - ဇူလိုင်လ ၂၇,၂၈,၂၉ (သောကြာ,စနေ,တနင်္ဂနွေ)
(၂၇ ရက်နေ့ သောကြာနေ့သည် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်)
အချိန် - ဇူလိုင် ၂၇ နံနက်(၉)နာရီ မှ ညနေ(၅)နာရီ
ဇူလိုင် ၂၈,၂၉ နံနက်(၉)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၃၀)ထိ
နေရာ - Myanmar’s Land Institute (ဆရာလင်းသိုက်ညွန့်), တော်ဝင်စင်တာ, ပြည်လမ်း, ရန်ကုန်မြို့
Price : 100,000.Ks
(+ Lunch , Tea Break)
Early Enrollment First 25 students - 80,000.Ks
Online မှ သော်လည်းကောင်း Myanmar’s Land Institute တွင်လည်းကောင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်
- ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ နှင့်တကွ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်
အသေးစိတ်ကို 09-442035959 (သို့) www.facebook.com/YLIMyanmar Page တွင်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်
Also check out other Business Events in Yangon, Workshops in Yangon.
Map Taw Win Centre, Taw Win Shopping Center, Yangon, 11191, Yangon, Burma
Film Seminar by Frances Calvert
Network Engineering Course (40% Discount)
Now or Never Special Promotion
MCSA:Windows Server 2012 Course
မြန်မာလိုသင်ကြားသည့် Microsoft Project Planning & Scheduling Vid
Orientation of Myanmar Business Model Competition 2018